घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
काठमाडौँ– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ८९ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज २०० रूपैयाँ घटेर ८८ हजार ९०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजावी सुन प्रतितोला ८८ हजार ४५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदी प्रतितोला १५ रूपैयाँले घटेको छ । […]
राष्ट्र बैंकले आज ११ अर्ब ८३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार रु ११ अर्ब ८३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो । केन्द्रीय बैंकले बिक्री गर्न लागेको ट्रेजरी बिल नवीकरण प्रयोजनका लागि हो । बैंकले रु पाँच अर्ब ५३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल ९१ दिनका लागि […]
काभ्रेमा तिनवर्षदेखि बुझाएनन् केवलको शुल्क
काभ्रे । काभ्रेमा इन्टरनेट प्रदायक तथा अन्य केबुलहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने रकम गत तिनवर्षदेखि बुझाएका छैनन । प्राधिकरणको नियम अनुसार विजुलीको पोलमा तार, केबुल, प्रयोग गरे एउटा संस्थाले वार्षीक ४५ हजार १ सयका दरले तिर्नु पर्नेमा ०७४ साल देखि कुनै पनी संस्थाले शुल्क नवुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्रले जनाएको छ । […]
सुदूरपश्चिमको मेल्लेख गाउँपालिकाले शुरु गर्‍यो ग्राम उद्योग
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिमको मेल्लेख गाउँपालिकाले पहिलो औद्योगिक ग्रामका रूपमा होजियारी उद्योग ग्रामको उद्घाटन गरेको छ । शुक्रबार होजियारी उद्योगको सुरुवातसहित उद्योग ग्रामको उद्घाटन गरिएको हो । उक्त उद्योगको औपचारिक रूपमा उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समितिका सभापति हर्क बहादुर कुँवर (गोविन्द)ले गरेका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष लोक बहादुर बोहराको अध्यक्षतामा भएको […]
घट्यो सुनको मूल्य, प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ – शुक्रबार असोज महिनाको पहिलो दिन पनि नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यामा गिरावट आएको छ । महिनाको पहिलो दिन छापावाला सुनको मूल्यमा प्रतितोला १ हजार ४०० रुपैयाँ मुल्य घटेर प्रतितोला ८९ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा १४ सय रुपैयाँले घटेर ८८ हजार ६५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको […]
पर्यटक आउने सहज व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसंग पर्यटन व्यवसायीको माग
काठमाडौं । पर्यटन व्यवासायीहरुले सरकारले तत्काल पर्यटकहरुलाई नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कोरोना महामारीको क्रम मत्थर हुँदै गएको भन्दै नेपाल आउने पर्यटकहरुकालागि विभिन्न विषयमा सहजता प्रदान गरी धेरै भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन । कोरोना महामारीको जोखिम कम भइरहेकाले सरकारले पर्यटकका लागि सहजता प्रदान गर्न अन […]
भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त लमजुङका ११६ विद्यालय भवन पुर्ननिर्माण सम्पन्न
शान्ता कमली, लमजुङ । २०७२ सालको विनासकारी भुकम्पले क्षती पुर्याएका लमजुङका विद्यालय भवनको पुर्ननिर्माण गरीएको छ । भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त लमजुङका १ सय ३१ मध्ये १ सय १६ विद्यालय भवनको पुर्ननिर्माण गरीएको छ । यो संगै लमजुङमा पुर्ननिर्माणको काम अन्तीम चरणमा पुगेको छ । वि.सं. २०७२ सालको विनासकारी भुकम्पपछि टहरामा पठनपाठन हुदै आएका लमजुङका विद्यालय पुननिर्माण […]
प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको तलब रोकिँदै
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण नभएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कर्मचारीसम्मले भदौ महिनाको तलब समयमै नपाउने भएका छन् । आजदेखि संशोधित बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगराउञ्जेल सरकारले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च पाउने छैन । गएराति १२ बजेदेखि नै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने […]
असोज ४ गतेदेखि नयाँ नोट साँट्न पाइने
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गतेदेखि दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने जनाएको छ । मुद्रा व्यवस्थापन विभागले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हकमा असोज ४ गतेदेखि सबै वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत नोट वितरण हुने जनाएको हो । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालय वा वाणिज्य बैंकले तोकेको आफू नजिकको शाखा […]